gbasara anyị - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
Ngalaba Ọgwụ Ikuku Ikuku
Usoro B / C
Valve Soidnoid Valve & Ikuku Ikuku Valves
Mechanical Valves & Valves Ndị Ọzọ
Ejima mkpanaka & Tri-Rod sịlịnda
Otu Aka Fittings
Pu Tubes & Ikuku ikuku
Gbalịsie ike bụrụ onye isi na ụlọ ọrụ ikuku na China
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd hiwere na August 2004, ọ dị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepe mmepe YUEQING. Companylọ ọrụ ahụ kpuchiri mpaghara 24000㎡, nwere 5 mmepụta bases na ihe karịrị Ndị ọrụ 300. Ọ bụ a na-abụghị na mpaghara enterprise ọkachamara R & D, mmepụta, ahịa na ọrụ mmezi nke pneumatic mmiri.
Ugbu a, anyị na-enye ngwaahịa pneumatic ise, dị ka ọgwụgwọ ikuku, ikuku pneumatic, cylinders, valves, solenoid valves, PU tubes na egbe ikuku, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị 100 na ọtụtụ puku ihe na ụwa niile. Anyị agafeela asambodo 9001: 2015 asambodo,, ISO 14001: 2015 asambodo njikwa gburugburu ebe obibi na CE markig nke EU. Ọzọkwa anyị bụ National High-tech Enterprise, National Standards emepe emepe nzukọ.
Anyị niile na-ewere "Ọdịmma Dị Elu" dị ka ihe kachasị mkpa, akụkụ ndị bụ isi na-emepụta site na nhazi akpaka, nke na-emesi ịdị mma nke ihe ndị ahụ ike. anyị na-ewe ogologo oge na-anwale ndụ ogologo oge ma na-ekwusi ike na ngwaahịa ọ bụla kwesịrị ịlele ma nwalee tupu nnyefe. Ka ọ dị ugbu a, "Mgbe ọrụ gasịrị" bụ ntinye anyị, n'ihi na anyị maara na ndị ahịa ahụ ga-aghọtacha omume anyị kwesịrị ịrụ ma mepụta ọtụtụ mmeri ọnọdụ.
N'ime afọ gara aga, anyị ebupụla karịa mba 30 wee nweta ọtụtụ nzaghachi dị mma. N'ọdịnihu, anyị na-atụ anya na anyị nwere ike ịkwado ndị ahịa na-arịwanye elu ma nwee ohere ịbụ ụlọ ọrụ na-eduga n'ụwa. Anyị na gị na-eto.
CHlọ ọrụ BLCH
FRL Assembly Onodi
Akpaka Assembly Onodi
Onodi machining Onodi
Ihe omumu ngwa agha nke Robotic
Pneumatic oyiyi akwa Ule
Ngwaahịa Pneumatic Warehosue
Mba, 387, okporo ụzọ Jingba, Mpaghara Development Economic, Yueqing, Zhejiang, China
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Nkwado ndị teknuzu:uwa niile Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap